भूमि व्यवस्थाका लागि शक्तिशाली आयोग बन्दै:मन्त्री अर्याल
Monday, 22 April, 2019 | ९ बैशाख २0७६ , सोमवार
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले अब कोही पनि जग्गाविहीन नहुने बताएकी छिन् । सरकारले जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न लागेको भन्दै त्यसले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका उपाए खोज्ने बताइन् ।
भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, जोखिमयुक्त क्षेत्रका बसोबासी, मोही र जमिनदारबीचको समस्यालाई वर्गीकरण गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । विगतमा पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न अयोगहरुले काम गरे पनि त्यसले पुर्णता नपाएको भन्दै मन्त्री अर्यालले ति अयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् । फेरि पनि सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी गरिहेको छ । अब संसद बैठक बस्नासाथ शक्तिशाली आयोग बन्ने उनको दावी थियो । अहिलेको सुकुम्बासीको तथ्याङ्क न गलत भएको हुन सक्दै भन्दै उनले शक्तिशाली आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने बताइन् ।
त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले जग्गाको वर्गीकरण पनि नयाँ तरिकाले गर्न लागिएको बताइन् । यसअघिको वर्गीकरणलाई विस्थापित गरेर नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको उनले बताएकी हुन् । जमिनको उपयोगका लागि पनि ऐन बनाउन लागिएको अयाएलले बताइन् ।
त्यस्तै, २३ सालमा भएको जग्गा नापीलाई पनि नविकरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । त्यसबेलाको नापीका कारण अहिले पनि लालपुर्जा वितरणमा समस्या भएकाले पुराना फाइल अध्ययन गरेर करिब १५ लाख जनतालाई सम्पत्तिका मालिक बनाउने मन्त्री अर्यालको दाबी छ ।
कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नै हराएको पाइए पनि सरकारको आधिकारिक नक्सामा कुनै गडबडी नभएको अर्यालले दाबी गरिन् । कतिपय ठाउँमा सिमा विवाद भए पनि नक्सा नै हराएको भन्ने हल्ला गलत भएको उनको जिकिर थियो । हिंसात्मक घटनामा परी नष्ट भएका लालपुर्जा पुनः वितरण गर्नका लागि पनि विशेष नापी गरिने अर्यालले बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले गरिब जनता लक्षित कार्यक्रम पनि ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन् । सहकारीलाई माध्यम बनाएर गाउँगाउँमा कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार खोजिने मन्त्री अर्यालको योजना छ । सहकारी बजार विकास कार्यक्रम ६ वटा जिल्लाबाट सुरु भइसकेको अर्यालले बताइन् । कृषिजन्य उत्पादनले बजार नपाउने समस्या समाधान हुने उनको दावी थियो ।
प्रकाशित २१ मङ्गसिर २0७५ , शुक्रबार | 2018-12-07 09:57:55
पोशाक भत्ता खल्तीमा कर्मचारी जकेटमा
दाने बोहरा /हुम्ला बैशाख । जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले तोकिएको पोशाक भत्ताबापतको रकम लिने तर पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको
रहेनन् नेपाली शब्दसागर पिता वसन्तकुमार
काठमाडौँ । वरिष्ठ साहित्यकार एवम् नेपाली शब्दसागरका रचनाकार वसन्तकुमार शर्मा नेपालको ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । फोक्सोको समस्याबाट
‘धर्मनिरपेक्षता तत्काल खारेज गर्नुपर्छ,
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफूहरुले अघि सारेका २२ सुत्रीय मागबारे सरकारबारे
विप्लवको नेपाल बन्दः कहाँ के भयो ?
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आव्हान गरेको बन्दको मुलुभर आंशिक प्रभाव परेको छ । नेपाल बन्दको
विवेकशील पार्टीका डेढ दर्जन नेता कार्यकर्ता
काठमाडौं । प्रहरीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गर्ने विवेकशील नेपाली दलका डेढ दर्जन नेता पक्राउ गरेको छ । बालुवाटारस्थित
‘हेर्दाहेर्दै साथीलाई विमानले किच्यो,
सोलुखुम्बु । नयाँ वर्ष २०७६ को पहिलो दिन वैशाख १ गते बिहानैदेखि अधिकांशको मोबाइलमा शुभकामना आदनप्रदानको कार्यक्रम चलिरहेको थियो
हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा पुगे
डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप 482.3K
सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि 188.2K
‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल 168.5K
सरलीकृत सेवा प्रवाह नै बैंकको मुख्य रणनीति होः प्रवीण बस्नेत, डेपुटी सिईओ, कामना सेवा विकास बैँक लिमिटेड 126.5K
गर्भ तुहाएर छात्रा हत्या गरेको अभियोगमा प्रधानाध्यापक पक्राउ 123.5K